Home News Madaxweyne Gaas oo dalacsiiyay saraakiil Ciidan (AQRISO)
Madaxweynaha Puntland ee xiligiisu gebagebada yahay Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta dallacsiiyay taliyaasha ciidamada Daraawiishta iyo Badda ee maamulkiisa.
Wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha ayaa min hal darajo lagu dallacsiiyay taliyaha ciidanka Daraawiishta Ex- Sarreeye Guuto haatanna ah sarreeye Gaas Cabdishukri Cabdullaahi Xuseen iyo Ex-sarreeye Guuto haatanna ah Sarreeye Gaas Cabdirisaaq Diiriye Faarax taliyaha ciidanka badda Puntland.
Talaabadan ayaa ku soo beegmaysda xili Madaxweyne Gaas muddo xileedkiisa ay uga dhiman tahay todobaadyo kooban, ayna socoto qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha cusub ee Puntland oo la filayo iney dhacdo bisha Janaayo ee sanadka 2019-ka.
Previous articleMaxaa laga filan karaa shirka wadamada khaliijka
Next articleC/kariin qalbi-dhagax oo Jigjiga ka degay iyo soo dhaweeyn cajiib ah oo loo sameeyay!!
Mas’uul loo xiray musuq maasuq iyo wax is daba-marin
Shababkii Ugu Badnaa Ee ku xirnaa Xabsiyadda Maamulka Puntland oo Baxsaday!!